आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १५ गते। सोमबार। – AstroSimara.Com
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १५ गते। सोमबार।
By Astro Sudeep Dhakal	 On Sep 30, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर १ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– सप्तमी, २६:३४ बजेउप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र– मृगशिरा, २४:२८ बजेउप्रान्त आर्द्रा। योग– व्यतीपात, १८:२३ बजेउप्रान्त वरियान्। करण– भद्रा, १५:३४ बजेदेखि वव, २६:३४ बजेउप्रान्त वालव। आनन्दादिमा आनन्द योग। चन्द्रराशि– वृष, १३:०५ बजेउप्रान्त मिथुन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:५७ बजे, सूर्यास्त– १७:४९ बजे र दिनमान २९ घडी ४० पला। सप्तमी श्राद्ध।
आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूको मद्दतले तपाईंको आवश्यकतामा ध्यान दिनेछ। भोलि धेरै देरी हुन सक्छ यसैले तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई आफ्नो सन्देश व्यक्त गर्नुपर्छ। आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
आफ्नो बच्चाको कार्यले तपाईंले धेरै खुशी दिन सक्छ। सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। “आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ।” आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
आफ्नो सन्तुलन राख्नुहोस् अन्यथा तपाईंले केही कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना छ – यसले तपाईंलाई कुनै गम्भीर समस्यामा पार्न सक्छ। विशेष गरेर आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नुहोस् जो एउटा सानो पागलपन मात्र हो। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। आफ्ना आमाबाबुसँग आफ्नो खुशी बाँड्नुहोस्। एक्लोपन र निराशाको भावना हटाएर तिनीहरूलाई सार्थक महसुस गराउनुहोस्। एक अर्काको जीवनलाई कम कठिन बनाउन नसके हामी के को लागि बाँचेका हौं? रोमान्सका लागि राम्रो दिन। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
तपाईंको हडबडे व्यवहारले पत्नीसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। केहि पनि मुर्ख्याईंपूर्ण काम गर्नु अघि आफ्नो व्यवहारको प्रतिक्रिया सोच्नुहोस्। यदि सम्भव हुन्छ भने आफ्नो मुड परिवर्तन गर्न टाढा जानुहोस्। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। जवानहरूले स्कूल परियोजनाहरूको लागि केही सल्लाह माग्न सक्छन्। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आफ्नो जोडीको कठोर व्यवहारले गर्दा तपाईं दिनभरि उदास रहन सक्नु हुनेछ।
स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। केटाकेटीलाई तपाईंको कठोर व्यवहारले तिनीहरूलाई परेशान बनाउँछ। तपाईंले आफैलाई रोक्नु पर्नेछ र यसले मात्र आफु बीच बाधा उत्पन्न गराउँछ भनेर तपाईंले याद गर्नुहोस। तपाईंको मुस्कान आफ्नो प्रियको दुख निवारणको सबैभन्दा राम्रो औषघि हो। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
तपाईंको स्पष्ट र निडर हेराइले तपाईंका मित्रलाई व्यर्थ चोट लाग्न सक्छ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। आफ्नो भाइ तपाईंको उद्धार गर्न आउनेछ। एक-अर्कालाई खुसी बनाउन सहयोग र समन्वयसंग काम गर्नु धेरै आवश्यक छ। सहयोग जीवनको मुख्य वसन्त हो भन्ने जान्नुहोस्। तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंले केहि बाँट्न बिर्सिनुभएको कारण तपाईंसँग उनी झगडा गर्न सक्छन्।
तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। प्रेमयुक्त जीवनले आशा ल्याउँछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। रोमान्टिक गीतहरू, खुशबूदार मोमबत्ती, राम्रो खाना, र केही पेयहरू; यो दिन आफ्नो जोडीसित यस्तै नै हुनेछ।
केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउने धेरै राम्रो दिन हो। एउटा परिवारमा संलग्न दुवै मानिसहरू प्रेममा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो पार्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहोस् र सकारात्मक रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
तपाईं पर्याप्त आराम लिइरहेको छैन भने तपाईंले अत्यन्तै थकित महसुस गर्नुहुनेछ र अतिरिक्त आराम आवश्यक हुनेछ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। भेटघाट गर्ने अतिथिहरूले सांझ बिताउनेछन्। प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। यात्राले तत्काल परिणाम ल्याउने छैन तर भविष्यमा लाभको लागि राम्रो जग बसाउनेछ। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। ठूलो योजना र विचारहरू भएको कसैसँग तपाईँको आकर्षण हुनेछ – कुनै पनि निवेश गर्नुअघि व्यक्तिको विश्वसनीयता र प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
जीवनलाई खेलाँची नसोच्नुहोस्, जीवनको हेरचाह गर्नु वास्तविक भाकल हो भनेर महसुस गर्नुहोस्। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। तपाईंको राम्रो व्यवहारले परिवारलाई जीवन ज्योति दिन्छ। यस्तो निष्कपट मुस्कानसँगका व्यक्तिलाई केही मानिसहरूले मात्र प्रतिरोध गर्न सक्छन्। अरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने तपाईं एउटा सुगन्धित फूल जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईंका प्रेमीको अत्यधिक माँग गर्ने व्यवहारले आज रोमान्स कम नै हुने सम्भावना देखिन्छ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। वैवाहिक जीवनमा धेरै आशाले आज तपाईंलाई दुःखतिर धकेल्न सक्छ।
मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन। प्रेम सम्बन्धमा दास जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। तपाईंको कार्य व्यस्तताको कारणले तपाईंको जोडीले तपाईंको इमानदारी प्रति शङ्का गर्न सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा उनले कुरा बुझेर तपाईंले अंगाल्ने छन्।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १४ गते। आइतबार।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १६ गते। मंगलबार।